India: Herisetra Ao Gurgaon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2018 16:49 GMT
Tsy ela akory izao i Gurgaon, akaiky ny renivohitr'i India, no hanazo laza amin'ny fanintonana orinasa maro rantsana erantany sy ny fametrahana orinasa any ivelany. Feno fioben-toerana ara-barotra sy tranobe miezinezina maro, taratry ny New Economy (na Toekarena Vaovao) izy raha oharina amin'ny tanàndehibe hafa ao India.
Nitarika ho amin'ny tranganà herisetra maro ireo hetsika tao an-tanàa tato anatin'ny andro vitsivitsy. Raha tsidihana vetivety ny tontolon'ny bilaogy Indiana dia hita taratra ireo ahiahy sy ny hevitr'ireo bliaogera momba ny fanovàna eo amin'ny sehatry ny asa, ny zon'ny mpiasa, ny herin'ny fahefàn'ny polisy, ny herisetra ary ny toeran'ny Indian Economy (na ny toekarena Indiana).
Toerana iray tsara hanombohana ny lahatsoratra iray tao amin'ny Shashwati's Blog (na ny Bilaogin'i Shashwati) izay misy ifandraisany amin'ny filaharam-potoana, sy ny tantaran'ny vanim-potoana amin'ny ankapobeny. momba ireo hetsika raha ny fijery manokana ireo tranohevan'ny mediam-bahoaka, governemanta ary ireo solotenanà orinasa vaventy. Asehon’ny The Motorcyclists (na ireo mpitaingina koiarandroa) reo fanehoankevitra politika sasany mikasika ireo herisetra mifanesy.
Manana lahatsoratra izay miezaka ny manao jery maika, ary mamely ireo mpangoron-karena i Victor Serge. Voatsipik'ireo toe-javatra misy fa ilaina ny fanovàna avy hatrany ny sehatry ny asa ao India hoy ny The Acorn. Ny MediaWatch India no mandinika ny fandrakofana ataon'ny Media.
Miresaka mombanà lahatsoratra iray ao aminà Media ny Unmitigated Learnings. Mandini-tena ao amin'ny India Uncuti i Amit Varma ao anatinà lahatsoratra roa mitondra ny lohateny hoe “Barbarism at the gate” (Lozabe eo ambaravarana) ary “More thoughts on Gurgaon”( Fifantohana bebe kokoa amin'i Gurgaon). Tsapan'i Anurag fa manana anjara toerana lehibe tamin'ny fihantsiana herisetra ny Media.
6 andro izayPakistana